တောင်းရမ်း စားသောက် သူ အများ စု ရဲ့ တကယ့် ဘဝ အမှန် ကောက်ကြောင်း – Zartiman
မြန်မာနိုင်ငံမှာ များပြားလှတဲ့ ကလေးသူငယ်တွေဟာ ကံမကောင်းစွာနဲ့ယနေ့ထိ အခွင့်အရေးတွေ ချိုးဖောက်ခံနေရပြီး မညာမတာ ခိုင်း စားခံနေကြရတာကို ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အများအပြားတွေ့နေရဆဲပါပဲ…။ရန်ကုန်က သူတို့အသိမိတ်ဆွေတွေကလည်း စာရွက် ပေါ်မှာ စာစီမိတ္တူကူးပြီး ဘတ်စ်ကား တွေပေါ်မှာ စာရွက်ဝေပြီးတောင်းစားကြတာလည်း ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ ကားတစီးပေါ်တက်ရင် ငွေကျပ်ထောင် ဂဏန်းခန့်ရပြီး ကား၁၀စီးခန့် စာရွက်တက် ဝေရုံဖြင့် ငွေကျပ်၂သောင်းခန့် ရရှိနိုင်ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁နှစ် ကျော်လောက်က..မန္တလေးမြို့အတွင်း မှာ လိုက်လံတောင်း စားနေတဲ့..ကလေးလူကြီး တော်တော် များများကို တွေ့ဆုံပြီး.. သူတို့အတွက် အလုပ်ရရှိရေး..စားဝတ်နေမှု၊ အဆင်ပြေရေး..တို့ အတွက် ကျတော်နဲ့ ကျတော်တို.ရဲ့ ဆရာတွေ စုပေါင်းပြီး သုတောင်း စား တော်တော်များများနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီတွေ့ဆုံမှုမှာ ညဈေးတန်းမှာ တောင်းစားနေသူများ၊ မိန်းထဲမှာ..တောင်းစားနေ သူများ၊ ရ တနာပုံဈေး အနီးတဝိုက် တောင်းစားနေသူများ၊ ဘုရားကြီး.အနီး.ပတ်ဝန်းကျင် တောင်းစားနေသူများနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
အဓိက ရည်ရွယ်ချက် တော့ သူတို့အားလုံး..ရိုးရိုးသားသား လုပ်ကိုင်စားသောက်နိုင်ဖို့အတွက်ပါ။ ဒါကြောင့်.သူတို့တွေနဲ့ အဆင်ပြေနိုင်မယ့် အလုပ် နေရာတော်တော်များများ ကိုလည်း အစကတည်းက ရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။ တော်ကြာ အလုပ်နေရာ မရှိလို့ မလုပ်ချင် ဘူးလို့ ပြောမှာ စိုး လို့ပါ။ အဆုံးသတ်.ကတော့…မအောင်မြင် ခဲ့ပါဘူး။ တောင်းစားသူများကို လေ့လာလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ တောင်းစားသူ အများစုမှာ မိသားစု လိုက်ဖြစ်ကြပါတယ်။ တကယ်..မရှိလို့တောင်းစားတဲ့ လူတွေလည်း မရှိဘူးမဟုတ်ပါဘူး ရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အရမ်းနည်း လွန်းပါတယ်။ ကျတော်တို့တွေ့ဆုံပြီး မေးမြန်းတဲ့ မိသားစုတစ်စုဆိုရင် သူတို့တစ်အိမ်လုံးရဲ့ တစ်ရက် ဝင်ငွေဟာ. အနည်းဆုံး တရက်၅၀၀၀၀ကျပ် အထက်မှာ ရှိနေ ပါတယ်တဲ့။ မိသားစုက ၅ ယောက်ပါ..မိဘနှစ်ပါးနဲ့.သားသမီး၃ယောက်ပါ။ မိခင်နှင့် ကလေး အငယ်ဆုံး လေးဟာ မိန်းထဲမှာတောင်းတာပါ။ ကျန်တဲ့မိသားစုဝင် တွေကတော့..ညဈေးတန်း.ရတနာပုံ ဈေးစတဲ့ လူစည်ကား တဲ့နေရာတွေမှာ.တောင်းတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။မန်းလေးက မိန်းထဲမှာ ဆိုလည်း မိခင်က.တစ်နေရာမှာထိုင်နေပြီး။
ကလေးလေးကို..လိုက်တောင်းခိုင်းတာပါ..ညနေခင်းလေးတောင်း လိုက်တာနဲ့ နှစ်သောင်းနီးပါး ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကလေးငယ် နှစ်ယောက်က.ကျောင်းနေအရွယ် ရောက်နေပေမယ့်..ကျောင်း မနေရပါဘူး..တောင်းတာ.. ပိုက်ဆံရတယ်လို့ ကျောင်းလုံးဝ မထားဘူး လို့.သူ့မိခင် ကိုယ်တိုင်က.ပြောပါတယ် နောက်ပြီးထပ်ပြောပါသေးတယ်။ရတနာပုံဈေး အနီးနားမှာ တောင်းရမ်းနေတဲ့.သူ့.သားအကြီးဆုံးရဲ့ တစ်ရက်တောင်းရငွေဟာ..၃၀၀၀၀လောက်ရတယ်ပြောပါတယ်။
တကယ်လို့ ကျတော်တို့ရှာပေးတဲ့အလုပ်က တစ်လ..၆သိန်းလောက်ရမယ်ဆိုရင်….သူ့ကလေးကို သူတောင်းစားမလုပ်ခိုင်းတော့ဘူးတဲ့။ အဲဒီမိသားစုဟာ မြို့သစ်မှာ.အိမ်ပိုင်ခြံပိုင်ရှိပေမယ့်. အဲဒီ အိမ်ကိုတော့ အဌားချထားပြီး.ကျုးထဲမှာ တဲထိုးနေတယ်လို့ လည်း ပြောဆိုပါ တယ်။ ကျူးဖြစ်နေပေမယ့် ဆိုင်ကယ် ၃စီးရှိပြီး တစ်ယောက်ကို Ph တစ်လုံးဆီလည်း..ရှိပါတယ်။နေ့ပြန်အတိုး တွေလည်း. ပေးထားတယ် လ်ု့ ဆိုပါတယ်။ ဒါတကယ့်အစစ်အမှန်ပါ။ ကျတော်တို့ ဆရာတွေက.အငယ်ဆုံးကလေး.နှစ်ယောက်ကို ကျောင်းထားဖို့..။
တောင်းဆိုတဲ့ အခါမှာ.လုံးဝ ခါးသီးစွာ ငြင်း ဆန်ပါတယ်။ပြောလို့ လုံးဝ မရခဲ့ပါဘူး။ နောက်ထပ်ကလေးတွေရယ် အဘိုးကြီးအဘွားကြီး တွေနဲ့ ကလေးငယ်လေးတွေ ကို ဌားရမ်းတဲ့ ‌ဈေးကွက်လည်း ရှိပါသေးတယ် လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဘေးနားကလိုက်ပေးရုံနဲ့ တရက်တစ် သောင်းပေးဌားကြပါတယ် ကျတော်တို့..အားသွန်ခွန်စိုက်ပြီး.ကြိုးစားပေမယ့် ဒီပြသနာကို မဖြေရှင်းနိုင် ခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့်.လွန်ခဲ့တဲ့ ၁နှစ် ကျော်လောက်ကစပြီး အဲဒီ သူတောင်းစားတွေကို လုံးဝ မလှူတော့ပါဘူး။
အဖိုးအဖွားအသက်အရွယ်နဲ့ ခြေလက်မကောင်းတဲ့ လူတွေ ဆိုရင်တော့ လှူပါတယ်။ဘာကြောင့် မလှူသလဲဆိုတော့.သူတို့အတွက်ပါပဲ။ ဒီလိုသာ.ဆက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ လှူနေမယ်ဆိုရင်..သူတို့ဘဝတွေဟာ ဆက်လက်ပြီး နိမ့်ကျနေမှာပါ….မျိုးရိုးစဉ်ဆက် နိမ့်ကျသွားမှာပါ။ သူတို့မွေးဖွားလာမယ်.ကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ အနာဂတ်ဟာလည်း ပညာသင်ယူခွင့်ရရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့..ထင်မြင်မိပါတယ်။ပညာရဲ့ တန်ဖိုးကို.နားမလည်တဲ့..ကလေးတွေ ဖြစ်သွားရင် သူတို့ဘဝဟာ..လှနိုင်စရာ.အကြောင်းမရှိတော့ဘူးပါဘူး ။
ပိုက်ဆံကို လွယ်လွယ်လေးနဲ့ ရနေကြတော့ ရေသာခို အချောင်စားနေတဲ့..ဘဝကနေလည်း..ရုန်းထွက်နိုင်ကြမှာ.မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ နဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အတွက်လည်း နစ်နာစရာဖြစ်စေပါတယ် ရုန်းထွက်ချင်မှာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်. အဆိပ်ပင်တွေ ကို..ရေမလောင်းကြပါနဲ့…..ဥပဒေပေါင်းများစွာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြဠန်းထား ပေမယ့်လည်း ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ ဥပဒေလို မျိုးတွေကတော့ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသယောင်ယောင်နဲ့ ဖြစ်နေပေမယ့်။တကယ့်လက်တွေ့မှာတော့ အားရလောက် အောင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင် ခြင်းမျိုး မရှိနေပါဘူး..။
မွနျမာနိုငျငံမှာ မြားပွားလှတဲ့ ကလေးသူငယျတှဟော ကံမကောငျးစှာနဲ့ယနထေိ့ အခှငျ့အရေးတှေ ခြိုးဖောကျခံနရေပွီး မညာမတာ ခိုငျး စားခံနကွေရတာကို ကြှနျတျောတို့ ပတျဝနျးကငျြမှာ အမြားအပွားတှနေ့ရေဆဲပါပဲ…။ရနျကုနျက သူတို့အသိမိတျဆှတှေကေလညျး စာရှကျ ပျေါမှာ စာစီမိတ်တူကူးပွီး ဘတျဈကား တှပေျေါမှာ စာရှကျဝပွေီးတောငျးစားကွတာလညျး ရှိတယျလို့ပွောပါတယျ။ ကားတစီးပျေါတကျရငျ ငှကေပျြထောငျ ဂဏနျးခနျ့ရပွီး ကား၁၀စီးခနျ့ စာရှကျတကျ ဝရေုံဖွငျ့ ငှကေပျြ၂သောငျးခနျ့ ရရှိနိုငျကွတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
လှနျခဲ့တဲ့ ၁နှဈ ကြျောလောကျက..မန်တလေးမွို့အတှငျး မှာ လိုကျလံတောငျး စားနတေဲ့..ကလေးလူကွီး တျောတျော မြားမြားကို တှဆေုံ့ပွီး.. သူတို့အတှကျ အလုပျရရှိရေး..စားဝတျနမှေု၊ အဆငျပွရေေး..တို့ အတှကျ ကတြျောနဲ့ ကတြျောတို.ရဲ့ ဆရာတှေ စုပေါငျးပွီး သုတောငျး စား တျောတျောမြားမြားနဲ့ တှဆေုံ့ခဲ့ကွပါတယျ။ အဲဒီတှဆေုံ့မှုမှာ ညဈေးတနျးမှာ တောငျးစားနသေူမြား၊ မိနျးထဲမှာ..တောငျးစားနေ သူမြား၊ ရ တနာပုံဈေး အနီးတဝိုကျ တောငျးစားနသေူမြား၊ ဘုရားကွီး.အနီး.ပတျဝနျးကငျြ တောငျးစားနသေူမြားနဲ့ တှဆေုံ့ခဲ့ပါတယျ။
အဓိက ရညျရှယျခကျြ တော့ သူတို့အားလုံး..ရိုးရိုးသားသား လုပျကိုငျစားသောကျနိုငျဖို့အတှကျပါ။ ဒါကွောငျ့.သူတို့တှနေဲ့ အဆငျပွနေိုငျမယျ့ အလုပျ နရောတျောတျောမြားမြား ကိုလညျး အစကတညျးက ရှာဖှခေဲ့ပါတယျ။ တျောကွာ အလုပျနရော မရှိလို့ မလုပျခငျြ ဘူးလို့ ပွောမှာ စိုး လို့ပါ။ အဆုံးသတျ.ကတော့…မအောငျမွငျ ခဲ့ပါဘူး။ တောငျးစားသူမြားကို လလေ့ာလိုကျတဲ့ အခြိနျမှာ တောငျးစားသူ အမြားစုမှာ မိသားစု လိုကျဖွဈကွပါတယျ။ တကယျ..မရှိလို့တောငျးစားတဲ့ လူတှလေညျး မရှိဘူးမဟုတျပါဘူး ရှိပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ အရမျးနညျး လှနျးပါတယျ။ ကတြျောတို့တှဆေုံ့ပွီး မေးမွနျးတဲ့ မိသားစုတဈစုဆိုရငျ သူတို့တဈအိမျလုံးရဲ့ တဈရကျ ဝငျငှဟော. အနညျးဆုံး တရကျ၅၀၀၀၀ကပျြ အထကျမှာ ရှိနေ ပါတယျတဲ့။ မိသားစုက ၅ ယောကျပါ..မိဘနှဈပါးနဲ့.သားသမီး၃ယောကျပါ။ မိခငျနှငျ့ ကလေး အငယျဆုံး လေးဟာ မိနျးထဲမှာတောငျးတာပါ။ ကနျြတဲ့မိသားစုဝငျ တှကေတော့..ညဈေးတနျး.ရတနာပုံ ဈေးစတဲ့ လူစညျကား တဲ့နရောတှမှော.တောငျးတယျလို့ ဆိုပါတယျ။မနျးလေးက မိနျးထဲမှာ ဆိုလညျး မိခငျက.တဈနရောမှာထိုငျနပွေီး။
ကလေးလေးကို..လိုကျတောငျးခိုငျးတာပါ..ညနခေငျးလေးတောငျး လိုကျတာနဲ့ နှဈသောငျးနီးပါး ရတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ကလေးငယျ နှဈယောကျက.ကြောငျးနအေရှယျ ရောကျနပေမေယျ့..ကြောငျး မနရေပါဘူး..တောငျးတာ.. ပိုကျဆံရတယျလို့ ကြောငျးလုံးဝ မထားဘူး လို့.သူ့မိခငျ ကိုယျတိုငျက.ပွောပါတယျ နောကျပွီးထပျပွောပါသေးတယျ။ရတနာပုံဈေး အနီးနားမှာ တောငျးရမျးနတေဲ့.သူ့.သားအကွီးဆုံးရဲ့ တဈရကျတောငျးရငှဟော..၃၀၀၀၀လောကျရတယျပွောပါတယျ။
တကယျလို့ ကတြျောတို့ရှာပေးတဲ့အလုပျက တဈလ..၆သိနျးလောကျရမယျဆိုရငျ….သူ့ကလေးကို သူတောငျးစားမလုပျခိုငျးတော့ဘူးတဲ့။ အဲဒီမိသားစုဟာ မွို့သဈမှာ.အိမျပိုငျခွံပိုငျရှိပမေယျ့. အဲဒီ အိမျကိုတော့ အဌားခထြားပွီး.ကြုးထဲမှာ တဲထိုးနတေယျလို့ လညျး ပွောဆိုပါ တယျ။ ကြူးဖွဈနပေမေယျ့ ဆိုငျကယျ ၃စီးရှိပွီး တဈယောကျကို Ph တဈလုံးဆီလညျး..ရှိပါတယျ။နပွေ့နျအတိုး တှလေညျး. ပေးထားတယျ လျု့ ဆိုပါတယျ။ ဒါတကယျ့အစဈအမှနျပါ။ ကတြျောတို့ ဆရာတှကေ.အငယျဆုံးကလေး.နှဈယောကျကို ကြောငျးထားဖို့..။
တောငျးဆိုတဲ့ အခါမှာ.လုံးဝ ခါးသီးစှာ ငွငျး ဆနျပါတယျ။ပွောလို့ လုံးဝ မရခဲ့ပါဘူး။ နောကျထပျကလေးတှရေယျ အဘိုးကွီးအဘှားကွီး တှနေဲ့ ကလေးငယျလေးတှေ ကို ဌားရမျးတဲ့ ‌ဈေးကှကျလညျး ရှိပါသေးတယျ လို့ပွောဆိုပါတယျ။ဘေးနားကလိုကျပေးရုံနဲ့ တရကျတဈ သောငျးပေးဌားကွပါတယျ ကတြျောတို့..အားသှနျခှနျစိုကျပွီး.ကွိုးစားပမေယျ့ ဒီပွသနာကို မဖွရှေငျးနိုငျ ခဲ့ပါဘူး။ ဒါကွောငျ့.လှနျခဲ့တဲ့ ၁နှဈ ကြျောလောကျကစပွီး အဲဒီ သူတောငျးစားတှကေို လုံးဝ မလှူတော့ပါဘူး။
အဖိုးအဖှားအသကျအရှယျနဲ့ ခွလေကျမကောငျးတဲ့ လူတှေ ဆိုရငျတော့ လှူပါတယျ။ဘာကွောငျ့ မလှူသလဲဆိုတော့.သူတို့အတှကျပါပဲ။ ဒီလိုသာ.ဆကျပွီး ကြှနျတျောတို့ လှူနမေယျဆိုရငျ..သူတို့ဘဝတှဟော ဆကျလကျပွီး နိမျ့ကနြမှောပါ….မြိုးရိုးစဉျဆကျ နိမျ့ကသြှားမှာပါ။ သူတို့မှေးဖှားလာမယျ.ကလေးငယျလေးတှရေဲ့ အနာဂတျဟာလညျး ပညာသငျယူခှငျ့ရရှိတော့မှာမဟုတျဘူးလို့..ထငျမွငျမိပါတယျ။ပညာရဲ့ တနျဖိုးကို.နားမလညျတဲ့..ကလေးတှေ ဖွဈသှားရငျ သူတို့ဘဝဟာ..လှနိုငျစရာ.အကွောငျးမရှိတော့ဘူးပါဘူး ။
ပိုကျဆံကို လှယျလှယျလေးနဲ့ ရနကွေတော့ ရသောခို အခြောငျစားနတေဲ့..ဘဝကနလေညျး..ရုနျးထှကျနိုငျကွမှာ.မဟုတျပါဘူး။ နိုငျငံရဲ့ ဂုဏျသိက်ခာ နဲ့ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှု အတှကျလညျး နဈနာစရာဖွဈစပေါတယျ ရုနျးထှကျခငျြမှာလညျး မဟုတျပါဘူး။ ဒါကွောငျ့. အဆိပျပငျတှေ ကို..ရမေလောငျးကွပါနဲ့…..ဥပဒပေေါငျးမြားစှာ မွနျမာနိုငျငံမှာ ပွဠနျးထား ပမေယျ့လညျး ကလေးသူငယျအခှငျ့အရေး ဆိုငျရာ ဥပဒလေို မြိုးတှကေတော့ အကောငျအထညျဖျော ဆောငျရှကျနသေယောငျယောငျနဲ့ ဖွဈနပေမေယျ့။တကယျ့လကျတှမှေ့ာတော့ အားရလောကျ အောငျ အကောငျအထညျဖျော ဆောငျရှကျနိုငျ ခွငျးမြိုး မရှိနပေါဘူး..။